ရှိတ်အပ္ပဒူရာမန်၊ ဒေါက်တာ - ဝီကီပီးဒီးယား
↑ သီရိပျံချီ ဦးသာမြတ် (ဖေဖော်ဝါရီ). တို့ဗမာ မူစလင်ကြီးများ၏ လက်ရာများ။
↑ မောင်ခင်မင် (ဓနုဖြူ) (၂ဝဝ၄). ပသီပုံပြင် အရေးအသား၊ စာပေ မှတ်တိုင် များကို ဖြတ်သန်းခြင်း, ၈၆-၈၉။
↑ မလိခ. မြန်မာ စာပေ အဘိဓာန် အတွဲ ၄, ၃၃-၃၇။
↑ ဒေါက်တာ ရှိတ်အပ္ပဒူ ရာမန် (ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၇၇). တထောင့် တည ပြောရသော ပသီ ပုံပြင် ဝတ္ထုကြီး, ဒုတိယအကြိမ်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရှိတ်အပ္ပဒူရာမန်၊_ဒေါက်တာ&oldid=503577" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀၊ ၁၄:၅၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။